Ungazibulala kanjani izinqubo kalula | Kusuka kuLinux
Ngokuyisisekelo kukhona Izindlela ezi-4 de bulala ngempumelelo a inqubo en Linux: ibulale ngegama, ngokukhomba ingxenye yegama, nge-PID, ekhomba iwindi lenqubo ngesikhombisi segundane. Ake sibone ngamunye ngamunye ...
1 Kill: bulala inqubo usebenzisa i-PID yayo
2 killall: bulala inqubo usebenzisa igama layo
3 pkill: bulala inqubo usebenzisa ingxenye yegama layo
4 xkill: bulala inqubo ngokukhetha iwindi negundane
5 Okunye ukuphawula kokugcina
Kill: bulala inqubo usebenzisa i-PID yayo
Okuyinkimbinkimbi kakhulu kepha ngasikhathi sinye indlela enembile kunazo zonke yokubulala inqubo nge-PID yayo ("Isikhombi senqubo"). Noma yikuphi kwalokhu okuhlukile okungu-3 kungasebenza:
bulala -TERM pid bulala -SIGTERM pid bulala -15 pid
Ungasebenzisa igama lesiginali (i-TERM noma i-SIGTERM) ofuna ukuyithumela kunqubo noma inombolo yayo yokuhlonza (15). Ukubona uhlu olugcwele lwezimpawu ezingenzeka, ngiphakamisa ukuthi kubhekwe imanuwali yokubulala. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa:
Ake sibheke isibonelo sendlela yokubulala iFirefox:
Okokuqala, kufanele uthole i-PID yohlelo:
Lowo myalo uzobuyisa into enjengale:
Ngo-1986? Sl 7:22 / usr/lib/firefox-3.5.3/firefox
Sisebenzisa i-PID ebuyiswe ngumyalo ongenhla ukubulala inqubo:
bulala -9 1986
killall: bulala inqubo usebenzisa igama layo
Lo myalo ulula kakhulu
inqubo ye-killall process_name
Into eyodwa okufanele uyikhumbule lapho usebenzisa le ndlela ukuthi uma kunezimo ezingaphezu kwesisodwa zalolo hlelo olusebenzayo, zonke zizovalwa.
pkill: bulala inqubo usebenzisa ingxenye yegama layo
Kungenzeka ukubulala inqubo ngokuchaza igama eligcwele noma ingxenye yegama. Lokho kusho ukuthi asikho isidingo sokuthi ukhumbule inqubo ye-PID yokuthumela isignali.
Ngokuphindaphindiwe, le ndlela izobulala zonke izinqubo eziqukethe igama elifakiwe. Lokho kusho ukuthi uma sinezinqubo ezi-2 ezivulekile ezabelana ngegama egameni, zombili zizovalwa.
xkill: bulala inqubo ngokukhetha iwindi negundane
Le yindlela elula nesebenziseka kalula. Uma kwenzeka inhlekelele, mane ucindezele u-Alt + F2 ukuletha ibhokisi lengxoxo elizokuvumela ukuthi wenze imiyalo. Ukusuka lapho, sebenzisa umyalo olandelayo:
Isikhombisi segundane sizoshintsha sibe ugebhezi oluncane. Osekusele nje ukuchofoza ewindini ofuna ukulivala bese u-voila. Inqubo yokulahla.
Okunye ukuphawula kokugcina
Ekuphetheni, bengifuna ukwabelana ngamathiphu athile angasiza. Ku-Linux, njengakwi-Windows, lapho inqubo ilenga, iwindi okukhulunywa ngalo lingavalwa ngokuchofoza inkinobho ethi Vala (eyenziwe njengo-X). Ngemuva kwemizuzwana embalwa, iwindi lizovela lisibuze ukuthi ngabe sifuna ngempela ukubulala inqubo ngoba ayiphenduli kahle. Sithi yebo futhi yilokho kuphela.
Lokhu kusho ukuthi izindlela ezichazwe lapha kufanele zisetshenziswe uma kungenzeki lutho uma uchofoza inkinobho ethi Vala lewindi okukhulunywa ngalo.
Uma kwenzeka inhlekelele enkulu, ungakhohlwa ukuthi ngaphambi kokucindezela kungenzeka ukuthi wenze i- ukuqala kabusha "okuphephile".
Ekugcineni, kungasiza kakhulu ukuthola ukuthi yiziphi izinqubo ezisebenzayo njengamanje. Ngalokhu, izindawo ezihlukile zedeskithophu (i-GNOME, i-KDE, njll.) Zinamathuluzi wokuqhafaza alungiselela lo msebenzi. Kodwa-ke, uma ungeke ukwazi ukufinyelela kuzo noma umane ufuna ukukwenza kusuka ku-terminal, ungenza okulandelayo:
Uma kwenzeka lokhu kungasebenzi noma ungenayo iphakheji ehambelana nayo, ungahlala usebenza:
Lokhu kuzoklelisa zonke izinqubo ezisebenzayo, kanye namagama wazo kanye nama-PID.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungazibulala kanjani izinqubo kalula
«I-Ps -ef | "grep firefox" ayifani ne- "pgrep firefox"?
Kahle mathupha ngisebenzisa i- "pidof" ukuthola i-PID.
U-Iago Martinez Ocaña kusho
engikusebenzisa kakhulu ngukuthi:
~ $ phezulu
isibonisa uhlu lwezinqubo ezisebenzayo, khona-ke uma sishaya u- "k" noma sibhala "ukubulala" kuzosicela ukuthi i-pid yenqubo ibulale (siyifunda kusuka phezulu) bese singena, ukuphuma phezulu sicindezela u- "q".
Ukungena okuhle kakhulu, kepha leli fomu libonakala lilula kimi. Uma ukuphela kungasebenzi sizama u-ctrl + alt + f [1-6] bese sikwenza ukusuka lapho.
Phendula u-Iago Martínez Ocaña
Yeka ubuhlakani, ngiyabonga ngokungisiza, unginike isandla esikhulu ngalokhu okuthunyelwe!
U-Octavio Villanueva kusho
Sawubona! Kungenzeka yini ukuthi umyalo we-xkill wenza kuphela uhlelo lwe-X lunyamalale futhi luhlale luvulekile? Ngoba kuhlala kwenzeka kimi ukuthi uma ngiya kumphathi wemisebenzi inqubo isaphila futhi kufanele ngiyibulale.
Ngiyakuvuma, ngingumfana omusha kakhulu. Futhi imiyalo yokubulala ne-pkill izongisiza kakhulu. Siyabonga ngokuzifaka, ibhulogi enhle kakhulu.
Phendula u-Octavio Villanueva
heberth ardila kusho
Ngincoma i-htop is ukuthi kungcono kakhulu kulokho ...
sudo apt-get ukufaka htop
Phendula ku-heberth ardila
i-pidof akuyona eyabo bonke ama-Unix, ngokwesibonelo uSolaris awunawo lowo myalo, futhi lokho kusiholela ekusebenziseni i-ps enamandla.
I-htop isenzo esikhulu futhi iyasebenziseka
Endabeni yokusebenzisa i-PID, into eyiyo yi- $ kill PID ethumela isignali ye-SIGTERM ngokuzenzakalela, uma kwenzeka ukuthi inqubo ingaphenduli, $ kill -9 PID isetshenziswa ethumela isignali ye-SIGKILL, eyokugcina iqeda inqubo ngaphandle kokuyiyeka ukuvalwa okufanayo ngokufanele (kungahle kube nokulahleka kwedatha ngokwesibonelo). USIGTERM ubuza ngicela, USIGKILL umnika imbazo 🙂
Ngiyabonga kakhulu, ngizoyihlola uma kwenzeka kimi futhi.
umbuzo. Lapho imvelo yedeskithophu ilenga ku-Ubuntu (ngisebenzisa Ubunye), ingaqalwa phansi ngaphandle kokubulala zonke ezinye izinqubo? Angithuthukile kakhulu ku-linux futhi kwenzeka kimi kwesinye isikhathi ukuthi ngiyasebenza futhi ilenga, ukuphela kwento engiyenzayo ukuqala kabusha okuphephile, kepha ngilahlekelwa yikho konke ebengisebenza kukho.
Angazi noma ukungabaza kwami ​​kuyaqondakala yini.
Inqubo esifundeni se-zombie ayinakubulawa ngendlela yendabuko.
Lapha ukuthola eminye imininingwane: esdebian.org/wiki/matar-proceso-zombie
Ngokuthuthukile kakhulu, uyibulala kanjani inqubo kuZOMBIE?
ukukhiqiza ingxoxo encane 😀
UJorge Vips kusho
Kuhle kakhulu, yilokho ebengikudinga ..
Phendula uJorge Vips
Iqiniso ukuthi umyalo wokubulala ulusizo kakhulu. Ukukwazi ukubulala izinqubo ezicasulayo ngokumema ukubulala kuhle. Ekugcineni umyalo osebenzela okuthile.
Umbuzo wethiyori: Ukubulala inqubo kusho ukuthi iyeka ukusebenza. Ngakho-ke, umbuzo wami ungenye indlela, uma ngifuna ukuqala kabusha leyo nqubo engiyibulele, ngiyenza kanjani?
ubeke kahle ./ (igama lenqubo) &
ngalokhu uyisebenzisa futhi i-PID yakho izophuma nayo 😀
UJC Rivera kusho
Kuhle, benginesikhathi ngifuna usizo olunje. Kwangisiza kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana.
Ukubingelela okuvela eSan Luis Potosí, eMexico.
Phendula u-JC Rivera
Ngingazibulala kanjani izinqubo ezimbili ngazi i-PID yazo ngomyalo ofanayo?
Ngicabanga ukuthi 'yayibulala [i-PID yokuqala] [i-PID yesibili]
UGauchita Watafak kusho
I-athikili ethakazelisa kakhulu. Le webhusayithi yiwebhusayithi yami eyinhloko ye-linux.
ps izembe grep process_name (lokhu ukukuthola ohlelweni)
bulala -9 inqubo_id
Ngabelana ngesifundo samahhala se-bash online esihambahamba:
https://aprendemia.com/cursos/curso-de-bash-scripting Sethemba ukuthi kuzoba wusizo.
Phendula uGauchita Watafak
futhi uma bengifuna ukuthi kube yiphrofayili ku-linux kuphela evalayo njengoba kufanele ibe njalo?
isibonelo nginamaphrofayili ama-2 e-firefox avulekile
kepha ngifuna kuphela iphrofayili eyodwa ukuvala
Ngifuna kuphela iphrofayili 2 ukuvala njengoba umyalo kufanele ube
kusengaphambili ngiyabonga ngempendulo
Ngingazibulala kanjani izinqubo ezingaphambili zobuntu, ngomugqa owodwa womyalo